HALKAAN KA AKHRISO WARARKA WARGEYSKA M. TIMES EE MAANTA OO KHAMIIS 2-DA DICEMBAR 2021-KA
Thursday December 02, 2021 - 09:43:07 in Wararka by Mogadishu Times
"Ra’iisul wasaaruhu maaha garsoore seeri la taagan oo kiis walba laga doonayo inuu gaar u xalliyo,” R/W ROOBLE oo soo saaray go’aan la xiri ira hunfnaanta doorashooyinka dalka
Afhayeenka xukuumadda Soomaaliya, Md. Maxamed Ibraahim Macallimu oo qoraal soo saaray ayaa shaaciyey go’aanka ra’iisul was aaraha Soomaaliya ee ku aadan hunfnaanta doorashooyinka Golaha Shacabka ee ka so cda dalka.
Macallimuu ayaa sheegay in Maxamed Xus een Roobe ay ka go’an tahay in la dhawro hu fnaanta doorashada, isaga oo kaashanaya maamul goboleedyada iyo guddi yada kale.
"Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roo ble waxa ka go’an isaga oo kaashanaya Gola ha Wadatashiga Qaranka in la dhawro hufn aanta doorashada , waana sababta uu had iyo jeer guddiyada kala duwan ee doorashooyinka iyo guddiga xallinta khilaafaadka kulamada uu la yeesho uu ugu adkeeyo in ay doorashada u maamulaan si daahfuran,” ayuu yiri Macallimu.
Sidoo kale wuxuun intaasi ku daray in ma rkastaa oo shaqo la qabto ay imaaneysoc cil ad, balse loo baahan yahay in xallinteeda loo maro hanaan waafaqsan shuruucda dalka.
"Doorasho marka la fulinayo waa xaqiiqo in ay cillado la soo baxayaan ,balse hadii ay qala daad dhacaan waa in sixitaankooda loo maraa hab waafaqasan habraacyada doorashada ee aaney noqon mid caadifad ku dhisan , waxana awoodaas iska leh guddiyada u xilsaaran how shaas,” ayuu markale yiri afhayeenka xukuum adda federaalka Soomaaliya.
Waxa kale oo uu intaasi raaciyey ”Ra’iisul wasaaruhu maaha garsoore seeri la taagan oo kiis walba laga doonayo inuu gaar u xalliyo,”.
Hadalkan ayaa kusoo aadayo, iyada oo ra’I isul wasaaraha Soomaaliya loo gudbiyey caba sho la xiriira doorashada Golaha Shacabka, is aga oo kadib kula la qaatay xubnaha Golaha Wada-tashiga Qaran oo uu si gaar ah ugula hadlay daah-furnaanta doorashada 2021-ka.
Soomaaliya ayaa ku daahday xaaladda kala guurka ah ee ka dhalatay doorashooyinka dal ka baarlamaanka & tana madaxweynaha oo kadib dhacday waqtiga loo qorsheeyey
Xuseen Ceydiid oo sheegay arrimo xasaasi ah oo ku saabsan hay'adda NISA
Xuseen Maxamed Faarax Ceydiid oo ka mid ah musharaxiinta sanadkaan u isku soo ta agay xilka madaxweynaha Sooma aliya ayaa shee gay in Soomaaliya ay fa shil antay, "In kursiga xild hibaanka la gu kala gato ‘nus milyan’ waa nid aam kii na dumiyey, waa na sii dun ay hadda, xalka dalka ana kuma imaanayo sid aan,” ayuu yiri.
Xuseen Ceydiid aya sheegay hey’adda Sir doonka Soomaaliya ee NISA ay dhisatay dowl adda Qatar oo dastuurka Soomaaliya aysan ku qorneyn, "NISA Qatar ayaa soo sameysa tay, dastuurkana kuma tallo,” ayuu yiri Xuseen Ceydiid oo wareysigaan siiyey Goobjoog TV.
Waxa uu sheegay in dhawaan AMISOM ay soo jeedisay in Soomaaliya loo maareeyo si la mid ah 1992-kii oo la keeno ciidamo hor leh oo ka socda Qaramada Midoobey."Waxaa arrant aas u sabab ah gobolladii iyo dowladda dhexe ayaa iska hor yimid, dowladii waxay fashilan tay maareyntii doorashada, sababtoo ah gobol ladii ayaa ka hor yimid, marka khilaafku Sha lay waa saa’id,”ayuu yiri Xuseen Ceydiid.
Sidoo kale waxuu qabaan in casharro ba dan laga bartay doorashadii 2016-kii ee dowl adii Xasan Sheekh, isagoo sheegay in lacag aysan waxaba terin.
"Wakiilka QM, Swan waxuu u tegay Qatar, Sacuudiga iyo dhamaan dowladaha Carabta, waxuuna ku yiri hal dollar kuma bixin kartaan doorashada Soomaaliya, arrintaan ma socon karto marka,” ayuu hadalkiisa ku sii daray.
Xuseen Ceydiid ayaa ku faanay inuu ka dha shay qoys qaranimada Soomaaliya wax badan taray, sidoo kalena mudadii uu xukumayey dal ka uu afar milyan oo dollar ku dhisay madaxt ooyada Soomaaliya, isagoo u baahan lacagt aas oo sida uu sheegay oo guryo ku dhisan ka ray. Xigasho:-caasimadda.net
XIJAAR oo xil ka-qaadis ku sameeyay taliy aha magaalo ka mid ah degaan doorashada
Taliyaha ciidamada Booliska Soomaaliyeed, General Cabdi Xasan Maxamed (Xijaar), ahna guddoomiyaha guddiga amniga doorashooyinka ayaa Shalay wareegtu uu soo saaray ku sameeyay xil ka qaadi siyo magic aabis.
Taliye Xijaar ayaa xilkii ka qaaday Taliyihii ciid amada booliska ee magaalada Beledw eyne ee xarunta gobolka Hiiraan, Gaashaanle Maxa med Qorsheel, isaga oo ku bedelay Maxamed Xuseen Maxamuud (Duurdege).
Taliye Duurdege ayaa badalaya Gaashaanle Qorsheel oo ahaa Taliyihii ciidamada booliska ee magaalada Beledweyne oo kamid ah maga alooyinka loo asteeyay inay ka qabsoomaan doorashooyinka dalka.
Sarkaalka cusub ee la magacaa bay ayaa horey uga tirsanaa Hoggaanka Ciidamada booliska wuxuuna kasoo shaqeeyay gobolada koofurta iyo bartamaha Sooma aliya.
Waxaa xusid mudan in Gaashaanle Maxamed Qoorsheel uu ku mashquulsanaa nabadgalya da Magaalada Baladweyne oo ay ka dhaceyso Doorashada qaar kamid ah Xildhibaannada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka 11-aad ee Soomaaliya. Lamana oga sababta soo dad ajisay xil ka qaadistiisa.
Dhawaan ayaa la filayaa in doorashada Golaha Shacabka ka qabsoomto magaalada Beledweyne, waxaana amnigeeda iska kaas han doona ciidamada Booliska Beledweyne iyo kuw AMISOM.
Saciid Deni oo shaaciyey inuu go’aan ka gaaray waxa uu ka yeelayo ciidanka gadooday
Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdull aahi Deni oo mar kale ka ha dlay xiisadda ka taagan Mag aalada Boosaaso ee Gob olka Bari ayaa sheegay in maamulkiisa uu go’ aan ku gaaray in la ciribtiro ciida ma da iyo Hay’adaha sida gaarka ah u hoos taga shaqsiyaad gaar ah.
Deni ayaa tilmaamay in dhibaato weyn ay ka dhalaneyso marka ciidamada iyo Hay’adaha ay maamulayaan qoys ama shaqsiyaad gaar ah, wuxuuna sheegay in dhibaatooyinkaas ay kamid tahay in danaha dadkaan ay ka horm ariyaan tan guud, sida uu hadalka u dhigay.
"Dalkaan hal dowlad ayuu yeelanayaa, Hal ci idan ayuu yeelanayaa oo ma aqbali karno cii damo rag leeyihiin, markii aan imaanayay wa xa aan maqlayay nin weliba 2% ayuu dakhliga ku leeyahay, Maalintii ugu horreysay ayaan ka taqalusnay, ciidamo hebel leeyihiin dabayaaqa dooda ayaa socda,” ayuu yiri Deni.
Saciid Deni ayaa ku faanay in maamulkiisa uu wax badan ka qabtay dhibaato uu sheegay inay ka taagneyd waqooyiga Gaalkacyo, taa soo uu sheegay inay wax ka qaban waayeen maamuladii isaga ka horreeyey.
"Waxa aan Gaalkacyo tagnay iyada oo 30 wiil magaaladii oo dhan ciroole iyo caamo ay baryayaan, waxa aan wax ku qabsan karnaa waa sharci oo haddii la waayo ay u dhumeyso awoodda dowladda, dadka maamulka gacanta ku haya waxa aan ku wargelinayaa in aysan dadka ku takrifalin,” ayuu yiri Deni.
Hadalka madaxweynaha Puntland Saciiid Deni ayaa kusoo aadayo xilli uu khilaaf weyn kala dhaxeeyo hoggaankii hore ciidamada PSF ee uu xilka ka qaaday, kaasoo ka dha shay diidamada xil ka-qaadis uu ku sameeyey taliyaha ciidamadaas.
Wararka naga soo gaaraya gobolka Bari ay aa sheegaya in weli xiisad xoogan ay ka taa gan tahay gudaha magaalada Boosaaso ee xa runta gobolkaasi, taas oo u dhexeysa madaxw eynaha maamulka Puntland iyo saraakiisha ciidamada PSF-ta.
Ilo dadka deegaanka ah ayaa ayaa innoo sheegay in dhaq-dhaqaaq horleh Habeen hore iyo Shalay laga dareemay magaalada, taas oo ay wadaan ciidamada labada dhinac.
Wararka ayaa sidoo kale sheegaya in qoys as ka qaar ay ka barakaceen guryahooda, ka dib markii sii korortay cabsida laga qabo in dagaal uu ka qarxuo halkaasi.
Xaaladda ayaa kasii dartay markii Deni uu ciidamo horleh ku daabulay gudaha Boosa aso, halka dhankooda ay dhuufeyso magaa lada ka dhexe sameysteen ciidamada PSF-ta.
Deegaanada ay howlgalada ka sameeyeen ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM wax aa ka mid ahaa Baardheere, Xujuub, Ceelka Baar, Faafgumare iyo deegaano kale.
Taliyaasha Ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM oo howlgalka kadib saxaaf ada hadlay ayaa waxay sheegeen in ujeedka howlgalkooda Shalay uu ahaa xaqiijinta ama anka degmada Baledweyne oo la filayo in dha waan lagu qabto doorashada 25 kursi oo ka mid ah kuraasta Golaha Shacabka Baarlama anka 11 -aad ee Soomaaliya.
Deegaanada Shalay ay howlgalada ka sam eeyeen ciidamada is garabsanaya ayaa mas aafo ahaan magaalada Baledweyne waxay u jiraan ilaa ugu badnaan 10-KM, taaso ka dhi gan in Al-shabaab aysan ka fogeyn maga alada Baledweyne, waxaana xiliyada qaar ay ku soo qaadaan weerar Saldhigyada ciidanka AMISOM iyo kuwa DFS ku leeyihiin magaa lada Baledweyne.
Imaamka Mudullood oo caddeeyey saxiix aha rasmiga ah ee kursiga ‘uu ku guuleys tay’ Yaasiin Farey
Imaamka beelaha Mudullood Imaam Maxa med Yuusuf ayaa si adag uga hadlay dooda ka taagan doorashada kursigii uu ku soo bax ay Agaasimaha KMG ah ee NISA Yaasiin Farey, kaas oo tirsigiisu yahay Hop#067, waxuuna ka mid yahay kuraasta golaha shaca bka ee doorashadooda lagu qabtay Dhuusamareeb.
Imaam Maxamed Yuusuf ayaa caddeeyay in hanaan sax ah aan loo ma amulin doorashada kursugaas, iyadoo la ga rab maray nabaddoon Cali Jeesto oo masuul ka ah saxiixa kursigaas.
"Waxaan halkaan ka cadeynayaa in Cali Je esto uu odayga Waceysle yahay, dowladda waxaan leeyahay yaan lagu sirmin ninkaas Cali ah, qolada guddiga khilaafaadka waxaan lee yahay war na-warsada aan inla toosinee waxa qaldamay, anaga waxaan rabnaa dow lad ku dhisanta hanaan sax ah,” ayuu yiri Ima am Maxamed Yuusuf.
Imaamka ayaa fariin u diray guddiga xalin ta khilaafaadka oo haatan ay hor taallo dac wada kursigaas ay beesha Waceysle ku doodeyso in la boobay, waxuuna kula taliyey in xaqa iyo baadilka ay dadka u kala saaraan.
"Qoladiina khilaafaadka fartaa inku godneed ayaantaan, waxaa la dinka rabaa inaad wax saxdaan, xalay waxaan maqlaayey Ra’iisul wasaaraha oo idinla dardaarmaaya, waxaa la idinka rabaa wixii qaldamay inaad saxdaan, sidoo kale waxaan cadeynaa in Cali Jeesto yahay duqa Waceysle,” ayuu yiri Imaamka beelaha Mudullood Maxamed Yuusuf.
Madaxweynaha Ruushka Oo Ka Guddoo may Safiirka Soomaaliya Warqadaha Aqo onsiga Danjarinimo
Madaxweynaha wadanka Ruushka Vladimir V. Putin ayaa warqadaha aqoonsiga danjire-nimo ka guddoomay safiirka Cusub ee Soomaaliya u magacowday dalkaasi Ruushka Mudane Xasan Cabdi Daauud.
Munaasabad kooban oo lagu qabtay aqalka madaxtooyada dalka Ruushka ayaa madaxweyne Vladimir V. Putin waxaa uu qudbad ugu jeediyay safiirada cusub ee uu aqoonsiga ka guddoomay kuwaa oo gaaraya 21 danjire oo ka kala socday dalal ka duwan oo ay Soomaaliya ka mid tahay.
Mudane Xasan Cabdi Daauud ayaa ka shaqeynaya kor u qaadista xiriirka diblomaasiyadeed ee ka dhaxeeya Soomaaliya iyo dalka Ruushka gaar ahaan dhinacyada iskaashiga dhaqaalaha, waxbarashada, cafimaadka, ganacsiga iyo ciidamada .
Maxaa ka soo kordhay kursigii Prof. Jawa ari ee HOP#103?
Xubnaha Guddiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed ayaa kulan Baydhabo kula qaatay madaxweynaha ma amulka Koonfur Galbeed, Mu dane Cabdicasiis Xasan Max amed (Lafta Gareen), waxa yna ka wada-hadleen xaala daha ka soo kordhay doora shooyinka, gaar ahaan cabashada ka timid kuraasta illaa iyo hadda la doortay.Guddoomiyaha guddiga doorashooy inka ee heer federal, Mudane Maxamed Xas an Maxamed (Cirro) oo u warramay wariyey aasha ayaa kulanka kadib ka warbixiyey wax yaabaha ay diiradda saareen guddiyada door ashooyinka iyo madaxweyne Cabdicasiis Lafta Gareen, wuxuuna sheegay in ujeedka ay Bay dhabo u tageen ay la xiriirto wax ka qabasha da cabashooyinka kasoo laabtay iyo sida wax loo maareeyay.
"Socodka aan Baydhabo ku tagnay waxaa qayb ka ah in aan la kulano Madaxweynaha Koonfur Galbeed oo aan fadhi kala yeelanay arrimaha doorashooyinka, cabashooyinka ka soo laabtay & sida wax loo maareyay” ayuu yiri Maxamed Xasan Ciro oo ah guddoom iyaha guddiga doorashooyinka dadban.
Sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in dib u eegis lagu sameyn doono kursiga Hop#103 oo uu horay ugu fadhiyey guddoomiyihii hore ee Golaha Shacabka Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari, kaas oo dhowaan doorashadiisa lagu qabtay magaalada Baydhabo, isla-markaana uu ku soo baxay Mudane Maxamed Cali Xas an oo ka tirsanaa wasiirada Koonfur Galbeed.
"Baaritaanno ayaan ku sameyn doonaa kursiga HOP#103 ee uu hakiyay Guddiga Do orashooyinka FEIT, Dadka ay quseyso waan la kulmi doonaa si aan u fiirino cabashooyinka kasoo laabtay” ayuu markale hadalkan ku yiri guddoomiye Cirro.
Kursigan ayaa khilaaf horleh dhaliyey, ka dib markii guddiga doorashada ee heer federal uu hakiyey qabashada doorashadiisa, halka guddiga doorashooyinka Koonfur Galbeed uu ku gacan seeray go’aankaasi, kadibna uu qab tay doorashada.
Si kastaba, arrimahan ayaa kusoo aadayo, iyada oo meeshii ugu sarreysay ay gaartay qe ylo dhaanta ka timid ‘boobka’ socda ee doo rashada 2021, waxaana arrintan ay dhalisay in go’aano culus ay soo saaraan xubnaha golaha midowga musharixiinta mucaaradka.
DFS oo dowladda Zambia kala hadashay Soomaalida la xir xiray
Safiirka Soomaaliya ee Dalka Zambia, Xaa wo Xasan Maxamed ayaa waxaa ay kulan la qaadatay Wasiirka Wasaarada Arimaha Gud aha ee Zambia. Hon: Jack Mwii nbu, kaas oo ay uga wada habe en arrimo ku saabsan dalka So omaaliya.
Kulankaan labada dbinac ayaa ku saabsanaa howgladii ka dhacey magaalada Ndola iyo arimo ku saabsan qaxootiga Somaal iyeed ee ku nool dalka Zambia.
Sigaar ah labada shinac ayaa aad u falan qeeyeen dadka Soomaaliyeed ee dhawaan Cii damada Booliska dalla Zambia ku xir xiree Ma haalada Ndola, kuwaas oo siyaabo kala duw an u joogay dalkaasi Zambia.
Wasiirka Wasaarada Arimaha Gudaha ee Zambia. Hon: Jack Mwiinbu ayaa dhankiisa ba lan qaaday inay wax ka qabanayaan dhibaat ooyinkii xariga ahaa ee Soomaalida loo gey stay, kuwaas oo uu sheegay in uu aad uga xun yahay.War kasoo baxay Safaaradda Soo maaliya ee dalka Zambia ayaa waxaa lagu sheegay in mas’uuliyiinta Safaaradda ay Sha lay ama Beri tegi doonaan Magaalada Ndola oo ah halka Soomaalida lagu xir xiray si ay u sii wadaan wada-hadallada la xiriira dhibaat ada lagu haayo Soomaalida. Ogeysiin. Shalay "1 December ama 2da December 2021” ayaan waxaan soo Gaareynaa magaalada Ndola . Sa farkenaas oo isugu jira salaan iyo is xog wareysi. Ka dib holwgaladii ugu dambeeyay oo Booliska iyo shaqaalaha waaxda Socda alka Zambia ka sameeyen magaalada Ndola.
Waxaan wada hadalo kala sameyney daw lada Zambia iyo heydaha kale oo ey qusey sey, gaar ahaan Wasiirka Wasaarada Arimaha Gudaha, Waaxda Socdaalka iyo Hay’adda Qar amada Midoobay u qaabilsan Qaxootiga.
Waxaan idinla wadaagi doonaa, wixii ka soo baxey shirarkii is daba jooga ahaa ee aan la yaalaney madaxda heyadahaa kor ku xus an.
Wasaaradda Arrimaha dibadda Soomaal iya ayaa goir sii horreeysay waxaa ay walaac ka muujisay xarig Ciidamada Booliska Zambia Magaalada Ndola ugu geysteen Soomaali far abadan, hayeeshee Safaaradda Soomaaliya ee dalkaas ay wado qoeshooyin looga hortag ayo in aysan soo laaban falkaas oo kale.
Hubinti la’aan ka jirta Magaalada Boosaaso
Dhaqdhaqaaqyo ciidan oo xoog leh ayaa ka soconaya magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga dowlad goboleedka Puntland, halk aas oo aysan weli muuqan wax xal ah oo loo heley arrin ka dhex taagnayd madaxweyne Deni iyo Ciidanka sida gaarka ah u tabobaran ee PSF.
Sida uu kusoo waramayo weriye Maxamed Xasan Dhallo, xaaladda magaalada ayaa de gen Shalay, waxaana muuq da in uu jiro isu socod gaadi idka iyo dadka, lana furey qeybo ka mid ah magaa lada, hase ahaateen weli ay dadka dhegta u taagantahay.
Illaa Seddex ciidan ayaa ku sugan magaal ada, kuwaas oo kala ah Daraawiishta iyo cii damadda badda ee PMPF oo isku dhinac ah iyo ciidamada PSF-ta oo dhinaca kale ah, ku waas oo lagu soo waramayo in ay xeryahooda ku suganyihiin.
Dhanka kale qaybo ka mid ah magaalada ayay shacabkii ka qaxeen, waxaana ka mid ah xaafadda Ridwaan ee dhanka bari ee maga alada.
Waxaa weli socda isku dayo waanwaan lo ogu raadinayo xiisadda oo dhalatay kadib mar kii madaxweynaha Puntland uu dikreeto kusoo magacaabay taliye cusub oo ay yeelanayaan ciidamada PSF, taasi oo uu diiday taliyihii xil kaasi horey ugu hayay.
Waxaa Shalay waanwaan cusub bilaabay Beeldaaje Maxamed Beeldaaje Ismaaciil iyo odayaal kale, kuwaas oo isku dayaya in ay xaaladda qaboojiyaan.
Madaxweynaha Puntland, Siciid Cabdull aahi Deni oo Habeen hore hadlay ayaa sheeg ay in aysan Puntland ka wada jiri doonin labo ciidan oo kala talis ah, isaga oo shaqsiyaad uusan magacooda sheegin ku eedeeyay in ay doonayaan in ay ciidamo si gaar ah ugu dhex haystaan Puntland.
Xubnaha Midowga musharixiinta mucaa radka ayaa lasoo tabinayaa inay dib wada-hadal ula fureen hoggaamiyeyaasha Puntland iyo Jubbaland Saciid Deni iyo Axmed Mado obe.
Labadaan hoggaamiye goboleed iyo midowga musharixiinta mucaara dka ayaan isku fiicneyn bilihii lasoo dhaafay, wax aana kala tagooda sabab looga dhigay ballan ka bax la sheegay inuu Deni sameeyey iyo ha dalo labada dhinac laga xigtay oo aan u fii cneyn rag hal Aag kuwada jiri jiray.
Midowga musharixiinta mucaaradka ayaa kulamo uga socday Caasimadda Muqdisho wa xay ku qaadaceen doorashada dalka. Dhinaca kale, waxaa jira warar sheegaya inay la xiri ireen saraakiishii Badbaado Qaran ee hogga amisay dagaalkii hore, iyagoo kala xaajoonaya xaaladaan soo cusboonaatay.
Inay xamar gasho xiisad cusub waxay hak in kartaa doorashada guud, kamana taagna dood badan. Mucaaradka qaar waxaa u muu qata in aysan kaligood hakin karin doorash ada, haddii aysan helin Deni iyo Axmed Mado obe.
Labadaan nin ayaan weli bilaabin doorash ada Golaha Shacabka, mana rabaan inay bila abaan, iyadoo aan xal loo helin xaaladaha taa gan sida tirada Ergada iyo deegaan doora shada.
Waxay kaloo qiimeynayaan sida loo wajaho ama looga hortago maamul goboleedyada ill aa hadda kuraasta lagu boobay.
Isku soo laabashada Saciid Deni, Axmed Madoobe iyo mucaaradka uma fiicna Farma ajo, sida ay labadaas nin iyo mucaaradka isku aamini karaan mar kale ayaan caddeyn.
Wad-hadaladaan cusub waxaa hormuud u ah siyaasiyiin ka tirsan midowga musharixiinta mucaaradka oo ay waayadii dambe isku furna ayeen hoggaamiyaha Puntland Saciid Cabdu llaahi Deni.
Saciid Deni dagaalkii hore ee Muqdisho ka dhacay waxaa la sheegay inuu gacan maaliya deed ku lahaa, laakiin inuu mar kale diyaar u yahay inuu wax ku huro golof cusub ayaan fah am badan laga heysan.
Maxamuud Shido oo madax ka ah kooxda loo jaqaan Aaran Jaan ee la sheego inay Sa ciid Deni la maamusho Puntland ayaa dha waan safar ku yimid magaalada Muqdisho, waxaa la sheegay inuu Airport Hotel kula ku lmay xubno ka tirsan midowga musharixiinta.
Kooxaha doorashada gacanta ku haya qaark ood waxay u muuqdaan niman aan akhrin karin waxa ka dhallan kara doorasho la boobo.
Soomaaliya iyo dalalka ku hareereysan waxay intaba dhadhamiyeen, qaarna ay hadda gacanta ku hayaan doorasho la boobay ama loo maareeyey si aan heshiis lagu aheyn caq abadihii ka dhashay.
2 kursi oo go’aamin doona mustaqbalka guddiga xalinta khilaafaadka doorashada
Guddiga xalinta khilaafaadka doorashada Soomaaliya ayaa wajahaya tijaabo adag, oo xaqiijin karta waxa dhab ahaan guddiga uu ya hay ama uu isaga fogeyn karo xiriirka la rum eysan yahay inuu kala dhaxeeyo Villa Som alia.
Guddigan ayaa waxaa horyaalla cab ashooyin badan oo ku aadan kuraas la bo obay, hase yeeshee waxaa si gaar ah isha loo gu hayaa laba kursi oo miisaan culus oo go’ aan qaadashadooda aysan fududeyn.
Labadaas kursi ayaa kala ah; HOP#67 iyo HOP#103. Midka koowaad waa kii loo boobay taliyaha ku-meel gaarka ah ee NISA Yaasiin Farey, kan labadaana waa kii laga bo obay guddoomiye Maxamed Cusmaan Jaw aari.
Sida loo maareeyey labada kursi waxay caddeyn u noqdeen awoodda madaxweyne Farmaajo iyo sida uu gacanta ugu hayo inta badan maamulka doorashada. Yaasiin Farey waa nin uu watay, Jawaarina waa nin ay ka go’neyd inuu meesha ka saaro.
Hadda, guddiga doorashada waxaa hortaalla su’aal adag: Ma wuxuu isku xaqiijin doonaa inuu hoos tago Villa Somalia, sida mar kii horeba la rumeysnaa, mise wuxuu caddeyn doonaa inuu yahay guddi madax-banaan.
Haddii guddiga xalinta khilaafaadka ay wax ba kama jiraan kasoo qaadaan cabashooyinka laga gudbiyey labadan kursi; waxay caddeyn u noqon doontaa inuusan jirin guddi xalin khila afaad balse murashaxiinta xildhibaan iyo oda yaasha beelaha ay la macaamilayaan guddi hoos taga Villa Somalia, mana dhici doonto in mar dambe cabasho loo gudbiyo.
Balse haddii guddiga uu soo diido labadii doorasho ku sheeg ee kuraasta HOP#67 iyo HOP#103, waxay dib u hagaajin kartaa ma gaca iyo sumcadda guddiga, waxayna kalso oni badan siin kartaa murashaxiin iyo qabaa’il badan. Guddiga wuxuu horey u lumiyey kal sooni badan kadib markii uu ansixiyey kursigii uu sida cad u boobay ra’iisul wasaare ku-xige enka dalka Mahdi Maxamed Guuleed.
Su’aasha hadda waxay tahay, guddiga dib ma usoo celin doonaa kalsoonidii luntay, mise wuxuu daaqadda ka tuuri doonaa inta yar ee u hartay.
Ma ahan go’aan ay sahlan tahay inay xubn aha guddigan qaataan, sababtoo ah waxa horyaalla ma ahan oo kaliya inay laba kursi go’ aamiyaan, balse waa inay diyaar u yihiin inay ka tagaan kumanaanka dollar ee xubnaha gu ddiga laga siiyo Villa Somalia, ayaga oo ila ashanaya damiirkooda, dalkana ka badbaa dinaya dagaal sokeeyey.
Wararka qaar ayaa sheegaya inay suurta-gal tahay in guddiga uu ansixiyo kursiga Yaa siin Farey, balse diido kursiga Jawaari, maad aama kan koowaad uu muhiim u yahay Farm aajo. Sidoo kale, miisaanka siyaasadeed ee Jawaari wuxuu soo jeediyey indhaha beesha caalamka.
Sidaas darteed, ha la yaabin haddii arrintan lagu dhameeyo 1-1, balse taasi sooma celin doonto wax kalsooni ah, inkasta oo dadka aan fahansaneyn cayaaraha siyaasadeed lagu qaldi karo.
Somaliland oo ka jawaabtay wararka sheeg aya in ay taageertay dagaalka Tigrey
Wasiirka arrimaha dibada Somaliland D.R Ciise Kayd Maxamuud oo waraysi siiyay BBC Somali, ayaa sheegay in xukuumada Somal iland ay dhex ka tahay arrimaha Itoobiya.
Wasiir Kayd ayaa sheegay in Somaliland ay soo dhawaynayso dadaalkasta oo keenaya in Itoobiya nabad lagu soo dabaalo, lakin mawqifka siyaasada arrimaha dibada Somal iland uu yahay in anay Somaliland faragalin siyaasada arrimaha gudaha dal kale.
"Waxaanu taageersanahay waxkasta oo nabadgalyo iyo dhex dhexaadin ah oo Itoobiya ka socda, anaga Somaliland ahaan in aanan faragalin siyaasada gudaha ee Itoobiya wee yan mowqifka siyaasadayada arrimaha dibad da" ayuu yidhi Kayd.
Wasiirka oo ka ayaa dhinaca kale sheegay in madaxweynaha Dowlada Deegaanka Soom aalida iyo madaxweyne Biixi ay ka wada hadle en amniga, iskaashiga iyo arrimo la xidhiidha sirdoonka.
"Iskaashi uunbaa laga hadlay, nabad galya da ayaa laga hadlay iyo in la is waydaarsado sirdoonka, xidhiidhkii caadiga ahaa ee Itoobiya iyo Somaliland ka dhaxayn jiray uun baa laga wada hadlay" ayuu yidhi Kayd
Kadib kulankii Hargaysa ku dhex maray madaxweyne Cagjar iyo madaxweyne Biixi, ayay warbaahinta dowlada Itoobiya ee EBC oo ka waramaysay wixii laga wada hadlay shee gtay in madaxweyne Biixi taageeray
dagaalka Itoobiya kula jirto Tigrey.
Dagaalamaayasha AL-Shabaaba ayaa she egay in Magaalada Muqdisho ay ku dileen Sar kaal ka tirsanaa Ciidanka Dowladda Soomaaliya, waxaana ay intaa ku dareen in Barq animadii Shalay uu dilku ka dhacay degmada Wart anadda ee Gobolkani Banaadir, waa sida ay hadalka u dhigeene.
Warar lagu faafiyay Baraha Internet-ka ee ku hadla Afka Al-Shabaab ayaa lagu sheegay in Sarkaal Seddex Xiddigle ah ah ay ku dileen Degmada Wartanadda gaar ahaa aga-gaarka Isbertiibada ee Garoonka Stadium Muqdisho.
Sarkaalka ay sheegteen in ay dileen waxaa ay magaciisa kusoo koobeen Cali OK, balse a jirto cid Al-Shabaab ka madax bannaan oo ilaa iyo hadda caddeysay dilkaasi.
Dilka mas’uulka ayay sheegeen in ay fuliye en xubno ka tirsan Shabaab oo hubaysan.
Dhanka laamaha ammaanka ee Gobolkani Banaadir ma jiro wax war ah oo kasoo baxay oo ay kaga hadleen dilkaasi Al-Shabaab ay sheegteen in ay Muqdisho ka gaysteen.
Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi, oo madaxtooyada ku qaabilay safiirra da cusub ee Midawga Yurub iyo Sweden Soo maaliya u qaabilsan, Amb. Tiina Intelmann iyo Amb. Per Lindgarde, ayaa ka wada hadlay arr imaha doorashooyinka iyo horumarinta.
"Kulanka, ayaa lagaga wada hadlay xoo jinta xidhiidhka ka dhexeeya midawga Yurub iyo dalka Sweden, dardar gelinta mashaar iicda horumarineed, hadday tahay kuwii socd ay iyo hadday tahay kuwa cusub ee sannada ha soo socda qorshaysan" ayaa lagu yidhi war-murtiyeed kulanka kasoo baxday.
Sidookale, waxa lagu sheegay in kulanka lagaga wada hadlay arrimaha doorashooyinka soo socda ee Somaliland ka dhici doona sannadka danbe ee 2022, iyo
xaalada uu Geeska Afrika hada ku sugany ahay.
Warbixinta ayaa sidoo kale xustay in safii radu shacabka iyo xukuumada ku bogaadi yeen himiladooda "Wufuudda, ayaa dhinaco oda waxa ay madaxweynaha iyo shacbiga So maliland ku bogaadiyeen horumarka iyo hiigs iga ka socda kana muuqda Somaliland ee ah inay noqdaan kuwo ka gun gaadha himilooyin kooda fog iyo kuwa dhawba".
Socdaalkan ayaa ah koodi ugu horeeyay ee safiirada cusubi ay Somaliland ku yimaadeen tan iyo markii lasoo magacaabay.
Maamulka Puntland oo xukun ku riday 6 qof
Maxkamada darajada 1aad ee Gobolka Nugaal Puntland ayaa Shalay waxaa ay xukun ku riday 6 rag ah, kuwaas oo lagu soo qabtay inay ka ganacsanayeen maand ooriyaha Khamriga. Raggaan ayaa Maxkamadey ntooda wax aa ay soo martay heerar kala duwan, waxaana lagu soo qab tay howlgal laga sameeyay Guri kuyaalla Magaalada Garoowe ee Xarunta Gob olka Nugaal. Raggaan oo ay soo eedeyaay xeer ilaalinta Maxkamadda ayaa waxaa lagu kala xukumay min 5 sano oo xabsi ah iyo ga naax lacageed, sida uu ku dhawaaqay mid ka mid ah garsoorayaasha Maxkamada darajada 1aad ee Gobolka Nugaal.
Bilihii la soo dhaafay ayaa Maamulka Punt land waxaa ay dagaal kula jireen dadka ka Ganacsada maandooriyaha Khamriga, waxaa na howlgallo laga sameeyay magaalooyinka Garoowe & Gaalkacyo lagu soo qabtay Dad ka Ganacsada maandooriy aha khamriga.
Ciidamada DFS & Kuwa AMISOM oo howl galo ka sameeyay deegaano hoostaga M/ Baledweyne
Ciidamada dowladda Soomaaliya iyo Ku wa dalalka Jabuuti iyo Itobiya ee qeybta ka ah Ciidanka AMISOM ee ku sugan magaalada Baledwey ne ayaa howlgalo ka sameey ay deegaano dhowr ah oo ho os taga magaalada Baledwey ne ee Xarunta Gobolka Hiiraan.
Ciidamada iskaashanaya ayaa howlga lada waxay ka sameyeen ilaa 10 deegaan oo ka mid ah deegaanada hoos yimaada magaa lada Baledweyne oo ku yaala Bariga iyo Gal beedka degmada Baledweyne.
UmulKhayr Rooble oo beenisay in Harga ysa lagu xidhay
UmulKhayr Rooble Cilmi oo wasiirka diinta iyo awqaafta Somaliland sheegay in booliisku xidheen kadib markii, ay xukuumada ka cods atay sharci ilaalinaya dumarka aan xijaaban, ayaa sheegtay in aan la xidhin, cidna dacw aynin.
"Shalay shaqo ayaan u ba xay mardhawayd markaan nas asho imid uun baan ogaaday iya doo la leeyahay wasiirka ayaa da cwad ka gudbiyay oo waala xidhay, ma xidhni, cid i dacwaysayna ma jirto, nabadgalyo
iyo xasilooni ayaan anigu ku joogaa Som aliland" ayay tidhi Umul Khayr.
"Hadii ay dad doonayaan waddan kan in ay cambaareryaan waxan u sheegayaa in anan anigu marnaba mar marsiyo u noqon ka rin, cidii doonaysa in ay Somaliland ka dhigto jeel majnuun dadka lagu xidho iyaga ayay u taalaa".
Umulkhayr Rooble Cilmi oo ah gabadh reer Jabuuti ah oo dagan Hargaysa, ayaa Sha lay xili sii horaysay warbaahintu baahisay in la xidhay, iyadoo xiganaysa wasiirka diinta iyo awqaafta oo sheegay in booliisku xidheen
Dagaal dhexmaray Ciidamada Iran iyo Taliban
Taliban iyo Iran ayaa xaqiijiyay in dagaal uu ka dhex qarxay ciidamada ilaalada xuduu dda ee labada dal, laakin uusan dagaalkaasi geysan wax khasaare ah.
Warsaxaafadeed uu habeenkii Habeen ho re ahaa baahiyay afhayeenka Taliban Zabiul lah Mujahid ayuu ku sheegay in is faham-darro ciidamada ah uu dhaliyay dagaalka ka dhacay gobolka Nimruz ee Afghanistan oo ku yaalla xuduudda.
Mujahid ayaa sheegay in xaalku uu hadda deggan yahay ayna hoggaanka Taliban soo sa areen tallaabooyin looga hortagayo in isfa ham-waa noocaan ah oo markale dhaco. War baahinta Iran ayaa ku eedeeyay Taliban in ay dagaalka bilowday ka dib markii ay Arbacadii rasaas ku furtay fariisin ay lahaayeen ciidama da Iran, ka dib jahawareer ku aaddan marinka soohdinta labada dhinac.
Wakaaladda wararka Iran ayaa beenisay in askari looga qabsaday dagaalka. Iran ayaa ka mid ah dalal dhowr ah oo ay ka mid yihiin Shii naha, Pakistan iyo Turkey kuwaasi oo saf aaradahooda ay wali ka sii furan yihiin Kabul ka dib markii kooxdan Islaamiga ah ay saddex bilood ka hor la wareegtay gacan ku heynta Afghanistan ka dib markii ay dalkaasi ka bex een ciidamadii huwanta ee uu Mareykanku hoggaaminayay.
Trump oo sabab yaab leh ugu baaqay Ilha an Cumar inay raali-gelin siiso Soomaaliya
Madaxweynihii hore ee Mareykanka Don ald Trump ayaa bayaan uu soo saaray ku dal baday in Ilhan Omar oo ka tirsan Aqalka Wak iilada Mareykanka ay raali-gelin ka bixiso "inay ka tagtay dalkeedii hore ee Soomaaliya.”
"Ilhan Omar waa inay raali-gelin ka bixiso inay guursatay walaalkeed, gashay dambi baaxad weyn oo ah khi yaano doorasho
iyo mid socdaal, ay dhi masho u rajeysay Isr ael, ayna dayacday dal keedii hore, kaasi oo xitaa aan dowlad laheyn – oo ah waxa ay jeclaan laheyd inay aragto in Mareykanka uu noqdo,” ayuu Trump ku yiri bayaanka uu soo saaray.
Ilhan Omar, oo laga soo doorto gobolka Minnesota, ayaa ku dhalatay Soomaaliya 1982 -kii, waxayna magan-galyo ku timid Mareykan ka 1995-kii ayada oo caruur ah.
Trump ayaa sidoo kale qoraal uu twitter-ka soo dhigay July 2019 wuxuu ugu sheegay in Ilhan iyo saddex xubnood oo kale oo ka tirs an xisbiga Dimoqraadiga "inay ku laabteen me elaha ay dambiyada la dageen ee ay ka yima adeen, ayna xaliyaan.”
Ilhan ayaa marar badan lagu eedeeyey in Ahmed Nur Said Elmi oo ah seygeedii hore, uu dhab ahaan yahay walaalkeeda, balse ay Mareykanka ku keentay inuu yahay ninkeeda.
Ilhan ayaa hadalladaas ugu yeertay "aflagaa do iyo doqonnimo” waxayna 2016-kii baahisay bayaan dheer oo ay uga hadleyso sooyaalka guurkeeda.
Weerarka cusub ee Trump uu ku qaaday Ilhan ayaa yimid ayada oo sidoo kale dhowaan ay Lauren Boebert oo ah gabar Jamhuuri ah oo ka tirsan Aqalka Wakiilada Mareykanka ay sheegtay in Ilhan ay ka tirsan tahay "kooxda jihaadka.”
Tan iyo markii ay kusoo biireen Congress-ka ayaa waxay la kulmayeen weeraro Islaam naceyb ah oo uga imanaya warbaahinta midi gta iyo siyaasiyiinta Jamhuuriga, oo uu ka mid yahay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump.Waxay naceybkan inta badan ku muteystaan inay dhaliilaan siyaasadda iyo dhibaatada ay Isarel ku hayso shacabka Fala stiin
AKHRISO TOBANKA MAGAALO EE NOLOSHOODU UGU QAALISAN TAHAY CAALAMKA
Cilmi baaris ay sameysay hay’ada Sirdoonka Dhaqaalaha (EIU) ayaa lagu shaaciyay tobanka magaalo ee sanadkan dhamaanaya ee 2021 ugu nolosha qaalisanayd caalamka.
Magaalada kaalinta koowaad ka gashay ma gaalooyinkan ayaa sanadkii la soo dhaafay waxa ay ku jirtey kaalinta shanaad balse qiim eyn la sameeyay ayaa lagu ogaaday in dadka ku nool magaaladaas ay ku nool yihiin qiimaha ugu sareeya dhinac kas ta marka la fiiriyo cuntada,gaadiidka iyo waxyaabaha kale ee aadanuhu u baahan yahay.
Magaalada Tel Aviv ee Israa’iil ayaa markii ugu horeysay kaalinta koowaad ka gashay qiimeyntan, iyadoo ka sare martay hogaamiyihii sanadkii hore ee Paris, oo hadda ku jirta kaalinta labaad.
TilShalay Qiimaha Nolosha Adduunka ee 2021 waxa ay la socotaa qiim aha nolosha 173 magaalo oo caalami ah — 40 in ka badan sannadkii hore — waxana ay barbardhigtaa qiimaha in ka badan 200 oo badeeca do iyo adeegyo maalinle ah.
Xogta sahanka, oo la sameeyay in ka badan sodon sano, ayaa waxaa soo aruuriya kooxda caalamiga ah ee EIU ee cilmi-baarayaasha bilaha Maarso iyo Sebtembar kasta.
TilShalay waxaa lagu qiyaasaa marka loo eego qiimaha magaalada New York, sidaas darteed magaalooyinka leh lacagaha ka xoog badan doollarka Mareykanka waxay u badan tahay inay u muuqdaan kuwo ka sarreeya qiimeynta.
Zurich iyo Hong Kong ayaa ku kala jira Nambarka 4-aad iyo 5-aad sida ay u kala horreeyaan, iyaga oo sannadkii hore ku soo baxay kaalinta koowaad iyaga oo barbar socda Paris. New York, Geneva, Cop enhagen, Los Angeles iyo Osaka ayaa noqday 10 ka ugu sareeya.
Qiimaynta sare waxa ay ku sii socotaa in ay xukumaan magaal ooyinka yurubiyaanka ah iyo kuwa horumaray ee Aasiya. Maga alooyinka ugu hooseeya waxay u badan yihiin Bariga Dhexe, Afrika iyo qaybo yar oo Aasiya ah.
Magaalada Dimishiq ee dalka Suuriya ayaa mar kale gashay kaal inta koowaad ee magaalada ugu jaban caalamka, iyadoo dhaqaalah eeda dagaaladu halakeeyeen. Dimishiq iyo Tehraan waxay la kulmeen sicir barar aad u sarreeya 2021, si la mid ah Caracas ee Venezuela iyo Buenos Aires ee Argentina.
Halkan ka aqriso tobanka magaalo ee caalamka ugu qaalisan nolo shooda sanadkan 2021.
QARAX AY DAD KU DHAAWACMEEN OO KA DHACAY DALKA JARMALKA
Ugu yaraan afar qof ayaa ku dhaawacantay qarax ka dhashay bam duug ah meel u dhow xarun tareen oo mashquul badan oo ku taal mag aalada Munich ee dalka Jarmalka, sida ay booliisku sheegeen.
Qaraxa ayaa dhacay ka dib markii la qodayay me el u dhow saldhigga Donnersbergerbruecke oo ay ka socotay howlo dhismo ah, kaasoo sababay in bam uu qarxo.Qaraxa ayaa ka dhashay bam du ug ah oo diyaarad ay halkaa ku ridey dagaalkii labaad ee adduunka.
Macluumaad dheeri ah lagama helin nooca bamka,laakiin hubkii la isti cmaali jirey dagaalkii labaad ee aduunka ayaan ah wax caadi ah oo Jarmalka laga helo.
In ka badan 70 sano kadib dhamaadkii dagaalka, ku dhawaad ​​2,000 oo tan oo bambaanooyin nool ah ayaa laga helaa wadanka Jarmalka sa nad walba, Reuters ayaa werisay.
Marka loo eego qiyaasaha rasmiga ah, ilaa 15% bambooyinkii Daga alkii Labaad ee Adduunka ma qarxin, mararka qaarna waxaa lagu aas ay lix mitir dhulka hoostiisa.
CIIDAMADA DOWLADA ITOOBIYA OO DIB U QAB SADAY MAGAALADA SHEWA ROBIT
Dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in ciidamadeedu ay dib u qabsad een magaalada Shewa Robit oo 220km u jirta caasimadda Addis Aba ba, taasoo todobaadkii hore ay sheegteen dagaalya hanno ka soo jeeda waqooyiga gobolka Tigray.
Afhayeenka xukuumadda Legesse Tulu ayaa she egay Shewa Robit inay ka mid tahay dhowr magaalo oo yaryar oo ay dib ula wareegeen ciidamada Itoobiya iyo ciidamada go bolka ee daacadda u ah Ra’iisul Wasaare Abiy Axmed, kaasoo todoba adkii hore shaaciyay inuu aadi doono furimaha dagaalka si uu u hogga amiyo weerar rogaal celis ah kaddib markii dagaalyahannada Tigray-ga ay ku hanjabeen u dhaqaaqayaan Addis Ababa.
"Jihada Shewa, Mezezo, Molale, Shewa Robit, Rasa iyo nawaaxige eda waa laga xoreeyay kooxda argagixisada ah ee TPLF,” Legesse ay aa ku yiri faallooyin laga sii daayay warbaahinta dowladda, isaga oo ulaj eeday Jabhadda Xoreynta Shacabka Tigray oo dagaal kula jirta. Xukuu madda Abiy muddo sannad ka badan.
Iska horimaadkan ayaa bil ka hor bilowday markii ciidamada Tigre egu ay sheegeen in ay qabsadeen magaalooyinka Istiraatiijiga ah ee Dessie iyo Kombolcha, kuwaas oo ku yaala wadada muhiimka ah ee Addis Ababa.
Haweeney looga shakisan yahay inay xiriir la leedahay kooxda Al-Shabaab ayaa fiidnimadii Talaadadii lagu xiray deegaanka Tinderet, ee gobolka Nandi.
Sida uu sheegay agaasimaha waaxda dambi baadhi sta, George Kinoti, askarta bilayska ee fadhigoodu yahay saldhiga Soghor ayaa xabsiga u taxaabay haweenaydan.
"Haweeneydu waxay u sheegtay dambi-baarayaasha inay Soomaaliya ku sugnayd laba sano, iyadoo sheegtay in ay Alshabab ka afduubteen deegaanka Kilifi, sannadkii 2019,” sidaas waxaa yiri dambi baare George Kinoti. Booliiska Kenya ayaa sheegay in haweenaydu ay qiratay in la baray xirfado ku saabsan maaraynta hubka, afduubka, isticmaalka walxaha qarxa iyo sidoo kale xirfado kale.
Laamaha dambi baaristu waxay sheegeen in tuhmanaha la sheegay in ay ka qayb gashay dhoolatuska qoritaanka askarta cusub ee mil atariga Kenya, ee dhawaan la soo gebagabeeyey.
Xarigeeda ayaa imaanaya maalmo kadib markii madaxweynaha Kenya uu amar ku bixiyay in amaanka guud ahaan la adkeeyo kadib weerarkii argagixiso ee ka dhacay dalka Uganda oo dad badan ay ku dhaawacmeen.
Dawladdu waxay sidoo kale kula talisay Kenyanka inay feejignaad aan gaar ahaan marka ay ku sugan yihiin meelaha dadku ku badan yah ay iyadoo loo eegayo khataraha argagixisanimo ee firfircoon.
Magaalada Addis Ababa ee Caasimadda dalka Itoobiya waxaa Shalay soo gaaray wafdi uu hoggaaminayo Wasiirka arrimaha dibadda dalka Shiinaha Wang Yi oo booqasho rasmi ah uga bolaabatay.
Wafdiga waxaa Garoonka diyaaradaha ku soo dha weeyay Ra’iisul-wasaare-ku-xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda dalka Itoobiya Demeke Mekon nen.Wasiirka arrimaha dibadda dalka Shiinaha ayaa inta uu ku sugan yahay dalka Itoobiya, waxaa la filayaa in uu kulammo la yeesho ra’iisul-wasaare-ku-xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda Demeke Mekonnen oo ay ka wada-hadli doonaan arrimaha labada dal iyo arrimo kale oo gobolka ah.
Itoobiya iyo dalka Shiinaha waxaa ka dhaxeeya xiriir diblomaasiyad eed, kaasi oo soo billowday tan iyo sannadkii 1970-meeyadii, ayaa haddana dib u xoojiyay xidhiidhka ganacsi, maalgashi iyo midka diblom aasi yadeed.